Akhriso: Bayaanka Madaxtooyada diyaarisay ee lagu fashilyey shirkii Afisyoone (Akhrintii Wasiir Dubbe) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo afjartay shirarkii hordhaca ahaa ee Afisyoone ee lagu tilmaamay gogolxaarka iyo kalsooni dhiska, loogana hadlayey in laga heshiiyo Ajendayaasha shirka Wadatashiga.
Bayaanka fashilka shirka oo ay diyaarisay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey Wasiirka Warfaafinta Cusmaan Abuukar Dubbe, waxaana bayaanka oo aad u dheer ka muuqada in maalmo ka hor la diyaariyey si maanta loo shaaciyo inuu shirku fashilmay.
Farmaajo ayaa la sheeay inuu diday qodobadii muhiimka ahaa sida: Inay dowladu tahay mid kala guur xilgaarsiin ah iyo in Amniga Doorashda la damaanad qaado, taasoo keenay in shirka la isku mari waayo.
Previous articleShirkii Afisyone oo la isu mari waayey iyo Xukuumadda oo fashilka ku eedeysay Siciid Deni iyo Axmed Madoobe
Next articlePuntland iyo Jubbaland oo shaaciyey War aanu fileyn Farmaajo. “Wuxuu Shirka maanta kusoo xirmay..” (Shir Jaraa’id)